Ngokombiko ovela enkampanini yolwazi nokuhlaziywa kweGlobalData, i-Amazon giant tech ihlela ukungena emakethe yomshuwalense wezimoto nezithuthuthu.
Lezi zindaba zibeka engcupheni ezinye izinkampani zomshuwalense obekufanele zidlule onyakeni onzima kulo lonke ubhadane lwe-COVID-19.
Ukungena kwe-Amazon emakethe yomshwalense kuzosiza ekushintsheni okulindelwe ngabathengi kokuthenga imikhiqizo yomshwalense ezinkampanini ezingezona ezendabuko.
I-Amazon akuyona yodwa, ngoba ezinye izinkampani ezinkulu zomhlaba wonke zobuchwepheshe (njengeGoogle, Amazon, neFacebook) nazo zinamakhasimende amakhulu ezingazisebenzisa lapho zidayisa umshwalense.
Ngaphandle kwesisekelo samanje samakhasimende, ucwaningo lukhombisa ukuthi abantu basanqena ukuthenga kubo.
Ucwaningo Lwabathengi Bomshuwalense we-2019 UK GlobalData luthole ukuthi abathengi abangama-62% bakhetha ukungathengi imikhiqizo yomshwalense kwa-Amazon. Ngokunjalo, abathengi abangama-63%, 66% kanye no-78% ngeke bathenge umshwalense kwaGoogle, Apple nakuFacebook, ngokulandelana.
Umhlaziyi womshuwalense weGlobalData uBen Carey-Evans uthe: “Lesi sikhondlakhondla sobuchwepheshe siqala lo mkhiqizo eNdiya, kodwa ububanzi bawo bebhizinisi bukhulu kakhulu, okungenza ekugcineni kube ngumncintiswano oqinile ezinkampanini zomhlaba ezisunguliwe.
Kuze kube manje, umshwalense wezimoto ubungomunye wochungechunge lwemikhiqizo embalwa engathinteki kangako yi-COVID-19. Njengoba abantu behamba kancane, inani lezimangalo lehle kakhulu. Kodwa-ke, izinkampani zomshuwalense ngeke ziwamukele lo mncintiswano owengeziwe, njengoba ukuthengiswa kwezimoto kulindeleke ukuthi kwehle ngemuva kwalolu bhubhane njengoba abathengi beqhubeka nokusebenza ekhaya. ”
U-Yasha Kuruvilla, ongumhlaziyi womshuwalense kwa-GlobalData, ungeze wathi: “Ngenxa yokuthi amakhasimende ayanqikaza ukuthenga umshuwalense ezinkampanini zobuchwepheshe, kuyisu elingcono ukubambisana nabahlinzeki abavela eceleni, okungenani kuze kube yilapho iba yinkampani yomshuwalense eyaziwayo.
“Ukubambisana kwe-Amazon nenkampani yezobuchwepheshe yomshuwalense i-Acko kunokuba kube yinkampani esunguliwe nakho kugqamisa isifiso somthengisi sokusebenzisana nezinkampani ezisebenza ngobuchwepheshe besimanje. Lokhu ngeke kubeke ingcindezi enkulu ezinkampanini ezikhona, kodwa hhayi kuphela ngenxa yezimakethe Kukhona abasha abasha abangenayo, futhi uma befuna ukusebenzisana nanoma yiziphi ezinye izinkampani zobuchwepheshe ezizayo ebhizinisini lomshuwalense, nabo badinga ukuya kwidijithali. ”
Isimemezelo sokuqala esiphakamisa ukuthi i-Amazon izongena embonini yomshuwalense wezakhiwo nempahla sikhishwe ngoMeyi 2019.
Sinabafundi bezindaba zokuqinisekisa kabusha ezingaphezu kuka-150,000 njalo ngenyanga kanye nababhalisile be-imeyili abangaphezu kuka-13,000 nsuku zonke. Imininingwane yokukhangisa itholakala lapha.
Siphinde sashicilela i-Artemis.bm, umshicileli ohamba phambili wezindaba zomkhakha, imininingwane kanye nokuqonda okuhlobene namabhondi enhlekelele, ukuphepha okuxhumene nomshuwalense, ukuhlangana kabusha komshwalense, ukudluliswa kobungozi bomshuwalense wokuphila kanye nokuphathwa kobungozi besimo sezulu. Kusukela kukhishwe ama-20, sikhiphe futhi sasebenza u-Artemis. Eminyakeni edlule, bekunabafundi ababalelwa ku-60,000 ngenyanga.
Sebenzisa ifomu lethu lokuxhumana ukuxhumana ngqo. Noma thola bese ulandela izindaba zokuqinisekisa kabusha kuma-social media. Thola izindaba zokuqinisekisa kabusha nge-imeyili lapha.
Wonke okuqukethwe copyright © Steve Evans Ltd. 2020. wonke amalungelo agodliwe. USteve Evans Ltd. (Steve Evans Ltd.) ubhaliswe eNgilandi ngenombolo 07337195, ubumfihlo bewebhusayithi kanye nesitatimende samakhukhi